UEFA Oo Gaadhay Go'aan Saamayn Ku Yeelanaya Man United, Liverpool, City, Arsenal, Chelsea Iyo Tottenham | Laacibnet.net
HomeSuuqa Kala IibsigaUEFA Oo Gaadhay Go’aan Saamayn Ku Yeelanaya Man United, Liverpool, City, Arsenal, Chelsea Iyo Tottenham
UEFA Oo Gaadhay Go’aan Saamayn Ku Yeelanaya Man United, Liverpool, City, Arsenal, Chelsea Iyo Tottenham
Xidhiidhka kubadda cagta Yurub ee UEFA ayaa la sheegay in ay go’aan ku gaadhay in ay meesha ka saarto sharciga dhaqaale wanaagga ee FFP, isla markaana ay ku beddesho shuruuc cusub oo la xidhiidha dhaqaalaha oo ka saamayn badanaya midkii hore.
Sharciga cusub ayaa la sheegay in kooxaha uu siinayo xorriyad ka badan intii hore oo ay ku samayn karaan saxeexyo ay ka bixiyaan lacag badan iyagoon wax cabsi ahi ka haynin in ay mutaysan doonaan ganaaxyo sababi kara in laga mamnuuco suuqa iibka ciyaartoyda.
FFP oo ah sharciga dhaqaale wanaagga ee hadda shaqeeya oo soo bilowday xilli ciyaareedkii 2010-11 ayaa toban sannadood oo uu shaqaynayay waxa uu caqabad ku noqday naadiyada waaweyn oo uu u xadaynayay lacagta aanay dhaafi karin ee ay suuqa gelin karaan iyadoo sidoo kalena la isku dheelli tirayay lacagta baxaysa iyo midda soo gelaysa.
Laakiin sida uu ku warramay wariyaha caanka ah ee Tancredi Palmeri oo Talyaani ah, UEFA ayaa meesha ka saaraysa sharcigan, waxaana miiska u saaran qorshe kale oo xorriyad badan iyo maalgelin badan ay kooxuhu ku samayn karayaan.
Warka ayaa intaa ku daray, in naadi kastaa uu isagoo xor ah suuqa gelin karayo lacagta uu doono iyadoo aanay wax cabsi ahi ka haynin UEFA oo markii hore ahayd dabarka joojinaya.
Kooxo badan ayaa sharciga FFP uu tobankii sannadood ee ugu dambeeyey xakame ku noqday, gaar ahaan naadiyada qaniga ah oo iyagoo lacag haysta awoodi waayey in ay lasoo saxeexdaan ciyaartoyga qaarkood.
Chelsea oo xagaagii hore suuqa gelisay lacag ka badan £220 milyan oo Gini oo ay kula soo wareegtay Timo Werner, Kai Havertz iyo Ben Chilwell ayaa mar kale heli doonta fursad ay qasnaddeedda ugu furto ciyaartooyo ay ka mid yihiin Erling Haaland.
Sidaas oo kale, Manchester United, Man City, Liverpool iyo Tottenham ayaa iyaguna is xoojin doona. Kooxaha kale ee Yurub ayaa iyaguna awooddooda dhaqaale kaga faa’iidaysan kara suuqa iibka.